Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny dia any Serbia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
by Dr Snežana Štetić
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Serbia » Ny olona Serba dia manana fona lehibe mandritra ny COVID mampiseho vina ho an'ny fizahan-tany sy tanjaka
Ny teny filamatry ny Serba mandritra ny areti-mandringana COVID-19 dia ny hoe: “Miaraka matanjaka isika.” Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, Serbia dia nahay, mahomby ary miray hina.
Serbia dia nanao hetsika mahery vaika mba hampalemy ny areti-mandringana koa amin'ny faritra sisa any Balkan
Nahavita be tamin'ny fiaraha-miasa isam-paritra; fampidirana toekarena; ary ny fividianana entana, olona ary renivohitra maimaimpoana mandritra ny areti-mandringana.
Ny mpitarika ny vondrona liana avo lenta an'ny World Tourism Network Dr. Snežana Šteti dia mitantara ity tantara kely ity momba ny olona manana fo lehibe - ny mponin'i Serbia.
Nanomboka tamin'ny Janoary 2021 ny tsimok'aretina betsaka tamin'ny mponina tamin'ny teboka 300 nanerana an'i Serbia. Ny mponina ao Serbia dia afaka nisafidy hatrany am-piandohan'ny areti-mandringana tamin'ny karazana vaksinina 4: Phajzer - BiONTeck, Sputnik V, Sinopharm, ary AstraZeneca. Mampalahelo fa ny firenena Balkanika hafa dia mbola tsy nanao vaksininy tamin'izany fotoana izany ary hidina hidina hidy.
Taorian'ny vaksinim-bahoaka voalohany, Serbia manomboka manampy maimaimpoana ireo firenena hafa ao amin'ny faritra amin'ny:
• fandefasana vaksinina amin'ny endrika fanampiana fanomezana amin'ny firenena mifanila aminy: Makedonia Avaratra (vaksin 48,000), Bosnia sy Herzegovina (30,000), ary Montenegro (14,000).
• Manasa ireo mpandraharaha hatao vaksiny any Belgrade (amin'ny alàlan'ny Chambre Commerce Serba). Amin'izany fomba izany, mpandraharaha maherin'ny 20,000 avy amin'ny firenena manodidina no nanao vaksiny.
• Serbia dia nandefa fanomezana 100,000 19 fatra amin'ny vaksinin'ny orinasa Phajzer - BioNTech manohitra ny COVID-XNUMX tany amin'ny Repoblika Tseky.
• Nantsoina ireo olom-pirenen'ireo firenena mifanila aminy hatao vaksiny any Serbia amin'ny toerana fanaovana vaksiny akaiky indrindra, izay neken'izy ireo.
• Olom-pirenena Serba maro avy any am-pielezana (firenena eropeanina) tonga any Serbia mba hanao vaksiny.
• Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana dia nandefa fanampiana tany Italia koa i Serbia tamin'ny endrika respirator sy fitaovana hafa.
Fantatr'i Serbia izany azo atao ny mandresy ny areti-mandringana raha miray hina isika, ary izany no antony tsy tokony hiheverantsika ny politika sy ny geopolitika fa hanampy ny rehetra araka izay tratra.
Ny tena zava-dehibe, ho an'i Serbia sy ny faritra, dia ny fiandohan'ny famokarana vaksinina any Serbia. Ny famokarana ny vaksinina Rosiana Sputnik V miady amin'ny coronavirus dia nanomboka ny 4 Jona tao amin'ny Ivotoerana ho an'ny Virolojia, Vaksinina ary Serum "Torlak" any Belgrade. Sputnik V, novokarina tany Serbia, dia mety ho eo amin'ny toerana fanaovana vaksiny ao anatin'ny 10 andro ary angamba vao haingana aza no mahatonga an'i Serbia ho firenena voalohany any Eropa namokatra ilay vaksiny.
Efa manavao ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany i Serbia. Ny mpitarika dia nandray anjara andraikitra lehibe tamin'ny dinika fanarenana ny dia nataon'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.